Banyere Anyị - Wuxi Co-Lee mbukota Co., Ltd.
1.Supplier maka Madị Maui Jim, Costa, Spy, Komono, BCBG, Fielmann wdg.
2.Contain a dịgasị iche iche nke ugogbe anya maka anwụ, iko okpokolo agba, ngosi ikpe, eyewear elekọta ngwaahịa wdg
3.OEM. Nabata usoro nnwale dị ala.
Ahụmahụ 4.10 +, CO-Lee na-enye ọrụ pụrụ iche.
5.Professional salespersons, na-enye 24-hour ahịa ọrụ online
Anyị nwere ndị ahịa karịa mba 30 na aha ọma anyị dị n'etiti ndị ahịa ọhụrụ na ndị ochie.
Ihe gbasara anyị
Anyị raara onwe anyị nye na-enye nile di iche iche nke elu àgwà iko ikpe na ngwa aghụghọ aghụghọ na n'ichepụta ọrụ maka n'ụwa nile ahịa.
Ndị ahịa anyị nwere nnukwu ọrụ na nka. Anyị na-enye ọrụ 24 awa na ntanetị maka ndị ahịa anyị n'akụkụ ụwa niile, na-aza ajụjụ gbasara ihe, nha, akara na nhazi ngwugwu ndị ọzọ.
Dị ka anyị na-emeputa, anyị na-enye dị ọnụ ala ị nweta, otu-akwụsị shopping na àgwà nlekota oru.
Anyị na-enye ngwugwu ngwaahịa ngwa ngwa na mbupu oge. Nkwakọ ngwaahịa anyị ga-ebelata mmebi nke ngwaahịa na usoro nke njem na mgbasa dị ka o kwere mee, hụ na nchekwa nke ngwaahịa, kwado nchekwa, njem, ibudata na ibudata, ma mee ka nyocha nyocha aka ngwa ngwa.
Hergbaso ntinye anyị na-emeju afọ nkwakọ ngwaahịa nke ndị ahịa chọrọ, anyị na-enyocha ụdị ubi dị iche iche iji jikọta usoro anyị na akụrụngwa anyị, yabụ iji nye ndị ahịa anyị otu ọrụ ịzụ ahịa, ahịa kacha mma ma mesie anyị obi ike.